Izindaba - Ungalithenga kanjani ijazi lemvula
Ungayithenga kanjani ijazi lemvula
Ngokuvamile kunezinhlobo ezi-4 zezinto ze-raincoat, ngayinye enezinzuzo nezinkinga zayo, ezingathengwa ngokuya ngezimo zangempela. Naka ukuhlukanisa ukuthi indwangu ye-raincoat iyisetshenziswa esenziwe kabusha yini. Okwenziwe kabusha kunephunga elehlukile, ingcina nendwangu kunamandla amancane ahlanganisiwe, ingcina imhlophe, futhi izoshwabana futhi isule ngesikhathi sokusetshenziswa.
Ukwenziwa kwengubo yemvula nakho kubaluleke kakhulu. Uma ubude bezitishi bejazi lemvula bukhulu kakhulu, ubude bezitishi abuhambisani, ukubekwa uphawu akukona ezingeni elifanele, futhi ukwelashwa okulwa nokuvuza akwamukelwa, kulula kakhulu ukungena emvuleni.
Izitayela zejazi lemvula ngokuvamile zisho amajazi emvula anezingcezu ezinde, ama-raincoats ahlukanisiwe nama-raincoats ekapa (i-poncho), ucezu olulodwa (olude) kulula ukugqokwa futhi kususwe kepha kunokungangeneki kwamanzi, uhlobo oluhlukanisiwe alunamanzi kakhulu, i-poncho ilungele ukuhamba ngebhayisikili ( amabhayisikili kagesi, amabhayisikili) Linda).
Lapho uthenga amajazi emvula, kufanele sicabangele ngokugcwele induduzo nokuphefumula. Uma ijazi lemvula elenzelwe ukuvikela imvula kuphela, kodwa lingaphefumuleki, lapho-ke lapho umzimba uvaliwe ukumboza umzimba womuntu, ukushisa emzimbeni akukwazi ukukhathala, nengaphandle lipholile kanti nengaphakathi liyashisa, lenza ukuqoqana kwamanzi nokumanzisa ulwelwesi lwejazi lemvula.
Amajazi emvula anosayizi abehlukene, ngakho-ke abathengi bayelulekwa ukuthi babheke ithebula losayizi lapho bethenga amajazi emvula. Kungcono ukuzama kuzo. Zama ukuthenga ezinkulu ukuze zisetshenziswe noma ngabe ugqoke izingubo eziningi zasebusika.
Umgomo oyisisekelo wokuvimbela amanzi ijazi lemvula indwangu + yokumboza. Izinhlobo ezijwayelekile zokumbozwa zifaka i-PVC (i-polyvinyl chloride), i-PU, i-EVA, njll. Amajazi emvula kulula ukusithinta ngqo isikhumba. Ukugwema ukucasuka kwesikhumba, kunconywa amajazi emvula ane-EVA.
Kulezi zinsuku, kunemibala eminingi yamajazi emvula, futhi izitayela ziyashintsha, kufaka phakathi isitayela saseBrithani, isitayela se-retro polka dot, umbala oqinile, umbala, njll. Ungacabanga ngokuhlanganiswa kwezingubo nokuthanda kwakho lapho uthenga ama-raincoats.